एप्पल स्प्रिङ इभेन्ट २०२१: के के सार्वजनिक भए? - Technology Khabar
» एप्पल स्प्रिङ इभेन्ट २०२१: के के सार्वजनिक भए?
एप्पल स्प्रिङ इभेन्ट २०२१: के के सार्वजनिक भए?
एप्पलले मंगलबार यस वर्षकै सबैभन्दा ठूलो स्प्रिङ लोडेड इभेन्ट आयोजना गर्यो। इभेन्टमा नयाँ आईम्याक तथा आईप्याड, प्याजी रंगको आईफोन १२ तथा एयर ट्यागलगायतका डिभाइसहरु सार्वजनिक तथा घोषणा भए।
एप्पलको उक्त इभेन्टमा के के सार्वजनिक हुनेछन् भन्ने आकलन अनुसारका थुप्रै विवरणहरु हल्लाका रुपमा पहिले नै सार्वजनिक भइसकेका थिए। तीमध्ये मंगलबारको इभेन्टमा सार्वजनिक भएको एयरट्याग, नयाँ एम१ चिपसहितको रंगीन आईम्याक, एम१ चिपसहितको नयाँ आईप्याड प्रो, एप्पल टीभी फोरके तथा प्याजी रंगको आईफोन १२ आकर्षणका केन्द्र रहे।
२९ डलर मूल्य तोकिएको एयरट्याग फाइन्ड माइ नेटवर्कमा जोडिएको छ जसले मानिस नभइ चिजबिजहरुमात्र ट्र्याक गर्छ।
एप्पलका सीईओ टिम कूकले भिडयो स्ट्रिमिङमार्फत् कम्पनीले वातावरणका क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्दै एप्पल कार्डको अपडेटका बारेमा जानकारी दिएका थिए।
यसलाई आफ्ना परिवारका सदस्य सबैलाई दिन मिल्ने भएकाले यसलाई एप्पल कार्ड फ्यामिली नाम दिइएको छ। यसबाहेक उनले एप्पल पडकास्ट एप नयाँ डिजाइनमा र त्यसमा सब्स्क्रिप्शन तथा रेकोमेन्डेशन पनि थपिएको बताए।
आईप्याड प्रो तथा आईम्याकमा के के परिवर्तन भए?
मंगलबार सार्वजनिक भएका आईप्याड प्रो तथा आईम्याक दुवैमा एम१ चिप राखिएको छ। आईप्याड प्रोमा २ जीबी स्टोरेज तथा १६ जीबी र्याम दिइएको छ। यसबाहेक फाइभजी कनेक्टिभिटी दिइएको छ भने यूएसबी-सी टाइपबाट थन्डरबोल्ट ४ पोर्ट राखिएको छ।
यसको क्यामरा अल्ट्रावाइड फिल्ड अफ भ्यूसहितको १२ मेगापिक्सेलको सेन्सर रहेको छ जसमा भिडियो कलका लागि शट रिफ्रेम गर्ने सेन्टर स्टेज नामको फिचरसमेत रहेको छ।
१२.९ इन्चको आईप्याड प्रो मा प्रो डिस्प्ले एक्सडीआर तथा ६०० निटको लिक्विड रेटिना एक्सडीआर पनि दिइएको छ। यसको मूल्य १ हजार ९९ डलरबाट शुरु हुन्छ भने ११ इन्चको ७९९ डलर तोकिएको छ।
पातलो रुपमा डिजाइन गरिएको आईम्याकमा एम१ चिपका दिइए पनि पहिले झैं पोर्टहरु पछाडिपट्टि मात्र राखिएका छन्। तर यसको पातलो बडी र बेजलले थुप्रैको ध्यान तान्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसको शुरुवाती मूल्य १ हजार २९९ डलर तोकिएको छ।
फेसबुकद्धारा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको आवाजलाई समेत प्रतिबन्ध
चालु आर्थिक वर्षको मध्यावधिसम्म करिब ९ हजार स्थानिय तहमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा